Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: fifaninanana andro voalohany | NewsMada
Hevitra mandalo resaky ny mpitsimpona akotry: fifaninanana andro voalohany
Marina fa tsy vao omaly no nanomboka ny fampielezan-kevitra tsy mivaky ho izany na tena efa naman’ny fandresen-dahatra aza, ny fanaingana mivantana ny mponina handatsa-bato ho azy sisa no tsy nataon’izay efa naka tombon-dàlana. Enga anie hitondra soa ho azy izany. Ny fifidianana rehetra, mainka moa fa fifidianana olona hiandraikitra any an-tampony ny fitantanana raharaham-pirenena, dia lazaina fifaninanana masina.
Tsy izay loatra anefa matetika no miseho. Ilay andraikitra izay andrandrain’ny tsirairay hiantsorohana no manana ny hasiny fa ny fomba fifampisintonana ahazoana ny fandresena dia miharo lalao maloto. Ny mitranga mandrakariva anefa dia tsy ilay fandraisana andraikitra masina loatra no tena nampiezaka ny maro fa ny faniriana hivalampatra eo amin’ilay toerana fiandrianana. Adino eo izany maha masina an’ilay adidy hifaninanana. Tsikin’ny mpirafy, fitapitaka sy fingampingana sisa tavela eo amin’ireo mpifaninana. Na tsy mifankahalala tsara aza ireo nametraka ny filatsahana tao amin’ny HCC, dia samy mahafantatra izao ny lisitry ny rehetra. Na sanatria aza mbola misy mety hongotan’io Fitsarana Avo io ka tsy ho afaka handray anjara hatramin’ny farany.
Noho izany dia azo lazaina fa misokatra ny fotoana fampielezan-kevitra na tsy misy aza na lalàna na fitsipika mifehy an’izany. Fifanamboarana ady gasy dia raikitra. Sery vitan’anamalaho tokoa ve andeha hamonoana vantotr’akoho? Ny tefitefy toy izany ihany anefa no mikiky ny fanjakana mahatonga ny fitondrana ho ratsy tantana. Raha mbola tefitefy sy faningitsinginana etsy sy eroa no atao fitsipika ifampifehezana dia mbola tsy tany tan-dalàna izany. Ny ady koropaka fara-fotoana matetika miteraka disadisa. Tsy ilaozan’izay lafin-javatra adino noho ny tsy fahampian’ny fandinihana. Efa tongotra mby an-dakana anefa ka tsy afaka hiverina intsony dia toy ny hoe am-pahendrena no ilazana hoe andao handeferana ny amin’ity, nefa toy izay ihany amin’ny manaraka.
Ry olom-pirenena nametraka filatsahana ho fidiana mba omeo toky ny vahoaka fa izay voafidy dia hanome hasina ny fampiharana ny lalàna. Ny lalàna tena izy ihany. Lalàna tsy tefitefena na tsingitsinginina arak’izay filan’ny mpitondra azy, no hany antoka hahatonga ny olom-pirenena tsy manana mpiaro tsy hiharan’ny tsy rariny. Na eo aza anefa ny lalàna, mbola manonja ihany koa ny herin’ny vola. Na manana ny rariny aza ny tena ka tsy eo ny entina ahafahana mitaky izany dia toy ny amin’ny andro migaingaina ny hafanana ka mandeha ao ambanin’ny aloka hazo fihinam-boa izay tsy azo notoazana na voany iray aza, narovana mafy ka lo am-pitoerana.